Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tonizia dia nanatratra ny UNWTO mba hanesorana ireo torohevitra momba ny dia
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia nametraka an'i Tonizia ho tandindonin-doza sokajy 2 azon'ny olom-pirenena amerikana aleha. Mitovy lenta amin'i Alemana na Bahama izany, saingy tsy dia mafy noho ny fampitandremana sokajy 3 hamelezana an'i Torkia. Ny sampan-draharaham-panjakana amerikana dia maniry ny hitandreman'ny olom-pirenena any Tonizia noho ny fampihorohoroana ary mitanisa ireo faritra tsy tokony halehan'ny olona.
Loharanom-bola lehibe ho an'i Tonizia ny fizahan-tany, ary niasa mafy ny firenena handresy ireo fampihorohoroana mahafaty maro izay lasibatra ny mpizahatany.
Ny sekretera jeneralin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) Zurab Pololikashvili dia ao amin'ny fivoriana any Tonizia miaraka amin'ny Lehiben'ny governemanta Toniziana Youssef Chahed. Nolazainy tamin'ny UNWTO fa be ny ezaka efa natao mba hanatsarana ny filaminana ho an'ny olom-pirenena sy ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fiarovana mahomby sy ny fanoherana ny asa fampihorohoroana.
Amin'ny lafiny iray dia nidera ny firenena i Pololikashvili noho ny fandraisana fepetra hiantohana ny fampandrosoana ny fizahantany sy ny fitomboana izay laharam-pahamehana ary mbola mitana andraikitra lehibe amin'ny toekarenan'i Tonizia.
Notsipihany fa i Tonizia dia iray amin'ireo firenena voalohany amin'ny faritr'i Mediterane izay namantatra ny sanda stratejika amin'ny fampandrosoana ny fizahantany. Tonizia, hoy izy fa afaka nifanaraka tamin'ny fanamby samihafa ary nanararaotra ny fifandraisana amin'ny rivotra sy ny fisokafan'ny visa tao anatin'ny taona vitsivitsy. Ny UNWTO dia mamporisika an'i Tonizia hanana fahitana ambony amin'ny sehatry ny fizahan-tany, manohitra hatrany ny zava-misy maharitra amin'ny asa maharitra ho tombontsoan'ny mponina ao an-toerana sy ny fotoana maharitra mipoitra avy amin'ny fizahan-tany.
Izany, hoy ny UNWTO Boss dia tena marina ho an'ny fizahantany ho sehatra mahomby toa an'i Tonizia mihitsy: ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena dia nitombo 23% tamin'ny taona 2017. Nilaza i Pololikashvili fa ny UNWTO dia tapa-kevitra ny hanohana ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra any Tonizia.
Ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO dia mitsidika mandritra ny roa andro any amin'ny firenena ary miaraka amin'i Zhu Shanzhong, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny UNWTO ary talen'ny departemantan'i Afrika Ms Elcia Grandcourt.
Miahiahy momba ny toro-hevitra momba ny dia sisa tavela any Japon sy Etazonia i Tonizia.
Ny UNWTO dia tsy misy fiantraikany firy amin'ireo torohevitra momba ny dia ataon'ny firenena izay manan-danja indrindra amin'i Tonizia amin'ny fizahantany. Nihaona tamin'ny haino aman-jery ao Tonizia ny sefon'ny UNWTO, saingy tsy tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny fanohanana ny gazety iraisam-pirenena. Mila maika ny fanohanan'ny media manerantany i Tonizia.
Tia mandehandeha? Te hihinana? Maninona i Portugal no tokony ho ao anaty lisitry ny siny